Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 Martsa 2020	• 26 Comments
Zava-dehibe ny miady hevitra amin'i Q Anon indray, satria maro no mihevitra ny lazain'ny rakitra Q Anon. Mino izy ireo fa misy toe-javatra lalina izay hohalazan'i Trump. Ny fanambarako dia: lalina kokoa ny lalina izay ahitana an'i Trump sy Q Anon. Lalao amin'ny […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 Martsa 2020	• 17 Comments
Lahatsoratra iray navoakan'ny NRC ankehitriny dia mazava fa indrindra ny lehilahy sy ny antitra dia maty amin'ny coronavirus. Teny notsongaina tamin'io lahatsoratra io: Olana lehibe iray miaraka amin'i Covid-19 dia ilay rivodoza cytokine, izay mety hitranga rehefa miharatsy ny pnemonia. Izy ity dia fanehoan-kevitra matanjaka tsy voafehy amin'ny rafi-kery fanefitra amin'ny otrikaretina be dia be, […]
Inona no tena endrik'ilay fitondrana miitatra amin'ny politika sy ny media amin'ny fifanarahana mifehy? Mariho ny tandindona avana. Ny avana avy amin'ny avana ve no tandindon'ny firenen'ny tontolo vaovao? Moa ve difotry ny onjan-dranomasina toa izao tamin'ny andron'i Noa ny izao tontolo izao? Inona no niseho indray […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 Martsa 2020	• 17 Comments
Na dia toa niala teo amin'ny antoko politika ankavanana aza i Robert Jensen, dia mbola mpankafy an'i Trump lehibe kosa izy. Ireo horonan-tsariny dia jerena be dia be, toy ilay amin'ilay kintana vaovao eny amin'ny habakabaka; ramatoa mino ny UFO ary manangona faribolana: Janet Ossebaard. Izany dia ao aminy […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 Martsa 2020	• 16 Comments
Rehefa nanomboka ny taona 2020 dia tsapako fa ho taona sarotra izany. Ny fijerena ny andiany farany mankany amin'ny fanidiana koronavirus covid-19 ankehitriny dia manome fanantenana kely sisa fa tsy ho ela. Tamin'ny Taom-baovao, dia nanoratra aho hoe: "Raha ny hevitro dia 2020 no taonan'ny fanolanana ary hypersonic [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 23 Martsa 2020	• 9 Comments
Ny fandrindrana ny Covid-19 Janet Ossebaard (faribolana, mpizara Ninefornews) koronavirus (jereo eto ambany) dia fandrika. Tokony ho fantatrao fa ny tompon-daka an-tsoratr'i IBM an'ny Blue Blue mahery indrindra amin'ny alàlan'ny tompondaka erak'i Kasparov tamin'ny chess tamin'ny voalohan'ny taona 1996 sy ny Google Alphabet's Quantum Computer nandresy ny tompon-daka eran-tany amin'ilay lalao miady sarotra indrindra tamin'ny taona 2016. Ankoatr'izay, tokony ho fantatrareo fa […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 23 Martsa 2020	• 10 Comments
Nandritra ny fivoriana Reddit 'manontany izay tianao', dia nanontany i Bill Gates momba ny valan'aretina covid-19 coronavirus. Hita ny valiny. Hoy izy hoe: "amin'ny farany, dia hanana fanamarinana dizitaly izahay mba hampisehoana hoe iza no nanamboatra na nisedra tato ho ato ary iza no nahazo vaksiny." Amin'ireo fanamarinana nomerika ireo dia afaka […]
Ny coronavirus dia toa mitondra fahamafisana lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Hitanao fa amin'ny fanafihana ny haino aman-jery sosialy amin'ny olona rehetra tsy sahy mitanisa hevitra hafa. Aza manao hadisoana akory. Nandritra ny 7 taona nanoratako, dia hitako fa ny isan'ny miaramila sivily izay mampiasa bullet keyboard azy amin'ny olona ao amin'ny media sosialy […]
Afaka miandry miandry tanteraka tanteraka any Holandy isika. Ny kabary nataon'i Rutte sy i King Willem Alexander dia famantarana eo amin'ny rindrina ary indrindra mampifaly ny vahoaka ary manome ny fahatsapana fa ho tsara daholo ny zava-drehetra. "Mety mbola kelikely kokoa," toy izany koa.
Filed in BOKY ADDENDUM, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 Martsa 2020	• 19 Comments
Ny ben'ny tanàna ao Amsterdam, Femke Halsema, dia nanamarika omaly fa tsy ho gaga ny fanakatonana tanteraka ho an'i Amsterdam. Tamin'ny 18 martsa, nitatitra i De Telegraaf fa efa manomana ny fanidiana tanteraka ny polisy. Ny tatitra tany Telegraaf omaly alina fa ny valanaretina koa dia miverina toa milaza ihany koa fa ny olana dia izao […]
«Previous page - Pejy manaraka »
Total visits: 1.453.340
guppy op Krizy Corona: Mety haharitra 2 ka hatramin'ny 3 taona ny fivoahana hanidy raha tsy misy ny fanaraha-maso sy ny fampiharana mialoha
Future op Krizy Corona: Mety haharitra 2 ka hatramin'ny 3 taona ny fivoahana hanidy raha tsy misy ny fanaraha-maso sy ny fampiharana mialoha